चितौनेहरुको मत – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चुनावअघि चर्चा भएको थियो, चितवन अमेरिकाजस्तो पो हो अर्थात् धेरै ठाउँका मान्छे आएर बसेको ठाउँ हो । चुनावमा कसको पल्ला भारी होला, फरक–फरक परिवेशबाट आएर बसेका मतदाता भएका हुनाले ठोकेरै भन्न गाह्रो छ । हुन पनि हरेक निर्वाचनपछि चितवनमा पहिलेको भन्दा फरक नतिजा सामुन्ने आउँछ । पहिला राजनीतिमा सक्रिय र अहिले समाज अध्ययनमा लागेका डीआर पोखरेललाई उम्मेद्वारी दर्ता हुने दिनको सेरोफेरोमा चुनावी परिणामबारे आँकलन गर्न अनुरोध गर्दा आएको जवाफ थियो– ‘हैन फरक त आउँछ–आउँछ, तर के–कस्तो फरक आउने हो, परिणामअघि भन्न गाह्रै छ ।’ त्यो अन्दाज अहिले मिल्यो पनि ।
भोट गन्दासम्म पनि कसैले कल्पना गरेको थिएन, चितवनमा यो पटक माओवादी शून्य नै हुन्छ भनेर । तर, यस्ता अनौठा परिणाम चितवनमा हरेक पल्ट आएकै छ । चितवन नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुको अत्यधिक बसोबास भएको जिल्ला हो । वामपन्थी राजनीति गर्नेहरु पनि कम छैनन् यहाँ । निर्वाचन परिणामहरुले यो तथ्य स्थापित गरेको छ । कहिले वामशक्ति त कहिले कांग्रेस चितवनका जनताको पालैपालोको रोजाइ बनेका छन् । तर, यो पटक जनता यी दुई शक्तिलाई पनि बदला लिने मुडमा रहेको देखियो, अर्थात् उनीहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ठाउँ दिए ।
वि.सं. २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा चितवनबाट निर्वाचित हुने दुई जनामा वामपन्थी व्यक्तिहरु विजयी भए । जागृतप्रसाद भेटवाल र भीमबहादुर श्रेष्ठ २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा चितवनमा अग्रपंक्तिमा रहे । ४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा चितवनमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो । क्षेत्र नं. १ मा एमालेबाट उनै जागृतप्रसाद भेटवालले जिते । दुईमा अहिलेको नेकपा (संयुक्त) र तत्कालीन नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) बाट भीमबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भए । क्षेत्र नं. ३ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अमिक शेरचन विजयी भए । ४६ सालपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा चितवनमा वामपन्थी मात्रै विजयी भए ।
नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको त्यो बेलामा चितवनमा कांग्रेसले एक सिट पनि नजित्नु धेरैलाई अचम्ममा पार्ने विषय थियो । यद्यपि तीनवटै वामपार्टीहरु तालमेल गरेर चुनावमा गएकाले वामपन्थीहरुको बर्चस्व कायम रहन सफलता मिलेको भने थियो । ४८ सालपछि २०५१ सालमा संसदीय चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी र कलह बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् नै विघटन गरेर देशमा मध्यावधि निर्वाचन गराए । ५१ सालको मध्यावधि चुनाव हुँदा चितवनमा चार निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो ।
यो पटक चितवनमा कांग्रेस, एमालेले बराबर सिट बाँडे । यो चुनावमा पनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । तर, चार क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं. १ र २ मा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भए भने क्षेत्र नं. ३ र ४ मा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भए । एमालेसँगको तालमेलका बाबजुद पनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल संसद्मा आउनबाट छुट्यो । त्यो बेला संयुक्त जनमोर्चा फुटेको थियो । सो पार्टीबाट पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एउटा ठूलै समूह बाहिरिएर चुनाव बहिष्कारमा लागेको थियो । चुनावी परिणाममा यसको असर देखियो ।
२०५१ सालको मध्यावधिपछि २०५६ सालमा संसदीय चुनाव भयो । त्यो बेलामा पनि चितवनमा चारवटै निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, यो बेलाको निर्वाचनमा चितवनका चारै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो । २०४३ सालदेखि कहिले एकछत्र त कहिले आधा जिल्लामा भए पनि बर्चस्व राख्दै आएका वामपन्थीहरु यो पटक भने पूरै निल भए ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेमा फूट आएको थियो । एमालेबाट फुटेर गठन भएको मालेसँग मात्रै होइन, पुरानो मित्रशक्ति संयुक्त जनमोर्चासँग पनि तालमेल नगरी एमाले निर्वाचनमा होमिएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । २०४३ साल र ४८ सालमा कम्युनिस्ट भएर चुनाव जितेका भीमबहादुर श्रेष्ठ ५१ पछि कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका थिए । यस्ता परिस्थितिका बीचमा भएको निर्वाचनले चितवनमा वामपन्थी शक्तिलाई निराश बनायो ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा चितवनमा एमालेलाई ठूलो सफलता मिलेको थियो । जिल्लाका दुवै नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको थियो । ३६ गाविसमध्ये धेरैजसो गाविस एमालेको पकडमा आएको थियो । दुई वर्षअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचन हेरेकाहरुले ५६ सालको चुनावमा एमाले त्यसरी पूरै क्षेत्रमा पराजित हुन्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । अर्थात्, त्यो बेलाको परिणाम पनि चितवनका लागि एक प्रकारले अप्रत्याशित नै थियो ।
५६ पछि देशले ठूलो उथलपुथल बेहो¥यो । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र राजाको ‘कु’, जनआन्दोलनको बलमा देशमा ६३ सालको सुरूवातसँगै नयाँ युग सुरू भयो । ५२ सालदेखि हतियार उठाएका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए । मधेस आन्दोलन भयो । आदिवासी जनजाति समुदायले पनि संघर्ष चलाए । यी सबै बेलामा देशमा गणतन्त्र आयो, नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन भयो । त्यो संविधानसभाले २०६५ जेठमा देशमा गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो ।
२०६४ सालको चुनावमा माओवादीको देशव्यापी माहौल थियो । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदा चितवनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्र कायम भए । त्यो बेलाको चुनावमा चितवनबाट तीन दलका उम्मेद्वार विजयी हुँदा कांग्रेसले कुनै क्षेत्रमा जित्न सकेन । यो अर्को अप्रत्याशित नतिजा थियो । एमालेले एक सिट जित्यो । तत्कालीन माओवादीले तीन र माओवादीको समर्थन पाएका तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका उम्मेद्वार अमिक शेरचनले चितवनमा चुनाव जिते । ६४ को चुनावपछि जनमोर्चा र माओवादीको एकीकरण भयो ।
विश्वमा कहीँ नभएको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन नेपालमा दोस्रो पटक भयो । संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभाको आयु सकियो । अनि, अस्ति भर्खर मंसिर ४ मा संविधानसभामा जाने सदस्य छनौट गर्न दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । माओवादीले यो पटक देशव्यापी रुपमा हार बेहो¥यो । चितवन पनि यसबाट अछूतो रहेन । धेरैले कल्पना नगरेको यसपटक माओवादी चितवनमा शून्य नै भयो । अघिल्लो निर्वाचनमा तीन दल जित्दा यो पटक पनि तीन दलले नै चितवनमा चुनाव जिते । तर कांग्रेस र वामपन्थीले मात्रै चुनाव जित्दै आएको चितवनमा यो पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पनि विजयी भए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पञ्चायती व्यवस्था पक्षधरहरुले बहुदलपछि खोलेको पार्टी हो । पञ्चायतकालमै पञ्चायती पक्षधरहरुलाई हराउने चितौनेले गणतान्त्रिक कालमा पञ्चायत समर्थकहरुलाई जिताउने कुरा माओवादी शून्यमा पुगेजस्तै अचम्म पार्ने खबर हो । तर, चितौनेको मतलाई अवमूल्यन गरेको भने होइन, यद्यपि यहाँको विशेषता के रह्यो भने सधैँ फरक–फरक मत आउने गरेको इतिहास छ । के आउँछ र कस्तो आउँछ, परिणाम नआउँदासम्म ठोकेर यसै भन्न सकिने अवस्था भने हुँदैन ।